Uyai neCigareti Yakapisa Solar Power Charger China Manufacturer
Tsanangudzo:Uyai Nechirwere Chiedza,LED Double Light,Mvura Inotengesa Pfuma
Uyai Nechirwere Chiedza,LED Double Light,Mvura Inotengesa Pfuma
Home > Products > Solar Power Bank > Flexible Solar Charger > Uyai neCigareti Yakapisa Solar Power Charger
Kubudirira: MEET CUSTOMER REQUIREMENTS
Iyi bhatiri yezuva inotengesa pfuma, inounza fodya uye chiedza chekusimudzira mapuranga, kunze kwekuchengetedzwa kwekunze, neine marambi maviri, LED iyo chiedza chakaviri chakavanzwa chivanze, mvura isina kufanira uye isina guruva, inonzi Waterproof Kutengesa Pfuma . high-grade texture design, inzwa wakasununguka, kupfeka kusagadzikana uye kunetseka, kunze kwegomba kusinga-TPU plastiki zvikwama, mukati memoto PC inopisa moto, standard USB output, power LED kuratidza, huwandu hwekuti huve pachena pahumwe, hushanda sehutungamiri , kuwedzera overload booster management system muhupenyu hwose, kuchenjera kwekuchengetedzwa kwekuchengetedza, zvakachengeteka.
Izvo zvakafanana nechiedza kunze. Chinonyanya kukosha iko kushandiswa kwemasimba maduku, kushandiswa kwakakodzera, kushambadzira kusingagumi, chivanze chakavanzika, USB chikwata chekutakura / chikwata cheMICRO chinotakura. Uyai Nechirwere Chiremba . Yakanyatsobatanidzwa, yakanaka uye yakakodzera, inopisa uye isina mvura. Kushandiswa kwema-grade grade polymer, kuchengeteka uye kuputika-uchapupu, hupenyu hurefu, masero ekushanda, hupenyu hwehutano hwemasero evanhu vasina huri uye husingazivikanwi hunowedzerwa neinopfuura 25%, uye nzvimbo inoshanda haisi nyore kupisa.
Mifananidzo miviri yakaumbwa, yepamusoro-grade yakagadzirwa, inonzwa yakasununguka, isingachinji, isingagadziki, isingagadziki, yakasara kusagadzikana TPU rubber kuvhara mukati mukati PC inopisa moto.
Intelligent converter, inobudirira kubuda, kuongororwa kwekutsvaga kwemazuva ano kubhadhara midziyo yekushandisa, kutengesa mamiriro ezvinhu, kwete kuonesa hutsinye huwandu hwehuwandu hwezvino, adaptive mararamiro akawedzerwa, anowedzera kuchenjera uye ane humwe hunyoro
Simba risina mvura, rakagadzirwa zvakanaka, hupenyu huzere nezvinhu zvinoshamisa
Imwe chete kristall silicon panels inogona kuchinja simba rezuva kuti rive magetsi, kuchengetedza magetsi akawanda anotora gore